Man Taurus owesifazane Taurus kulandelwa ukuba isisulu saso ukulandelana, akukho ukubaphoqa ukuba baphenduke ezindleleni zabo. Ziyakwazi lo mphathi wemfanelo, kanye nokuqinisela kwabo nokukhuthala ngokuvamile ethwele ukunqoba eside elindelwe. Umuntu lo uphawu has umbono ocacile ngokuthi izifiso zabo futhi ngokuthobeka umhlatshelo yena ukuze ukufinyelela umgomo wawo.
Ngokuthakazelisayo nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu ukuhambisana, Taurus owesifazane , futhi kuphela angakwazi ukuyibiza imizwa ejulile. Le ntokazi emangalisayo ayidingi romance bengafaké zicathulo, wakhe bakhonza esisebenzayo Taurus amabhuzu. Yena ehlotshisiwe ngegolide yangempela, futhi akwazi ukuziphilisa, ngisho yokuchitha isizungu engenangqondo. Kulesi league zonke izinto babezihlanganyela. Thanda bemvelo futhi konke elimila phansi. Futhi bobabili waphupha endlini yabo endaweni ethule. Ukuze wenze lokhu, bazosebenza ndawonye njalo wonge imali unyaka wonke.
Taureans akuzona njalo kwabonakala kusukela ekuqale-, futhi uma ungakwazi ukubona ngenxa umsebenzi siyakhazimula (ezombusazwe is hhayi ngaphandle). Thrust emhlabathini zingabonisa nganoma yisiphi isikhathi, mhlawumbe ngisho kuze kube sekupheleni ohambweni lokuphila.
Union indoda Taurus / Taurus owesifazane: emibili ngokungavamile kuhambisana nomunye, kuyoba bemlindile, kungakhathaliseki ukuthi mkhakha womsebenzi, akazange ukukhetha. Ukuhlanganiswa kwabo unamandla kakhulu. Ekuqaleni, lapho bobabili Taurus uthando abanothando, abanakho ukungavumelani kuze kube sekupheleni the kukankosikazi. Le nkiyankiya lokuqala nawu umbuzo yokuzalwa izingane. Taurus indoda ukholelwa ukuthi lesi senzakalo kufanele idluliselwe ekuqongeleleni inhlokodolobha ezidingekayo, kodwa owesifazane Taurus namanje uthola izingane elilodwa noma amabili.
Wabe uqala ukukhuluma nge indlela entsha ukuthenga, uyenqaba yakhe, ecaphuna lemali obanele of imali. Futhi kuzothatha futhi uthenge le nto. Ngakusasa waya ukuthenga emuva, okubonisa ukuthi kwakungewona angakwazi ukuphatha kwabo. Union "indoda Taurus owesifazane Taurus" - ushayisile ka nezizimele ezimbili.
Kodwa akubona bonke abantu abashadile kwalesi sibonakaliso ngakho olunezimiso womile kwabo inkululeko ukuboniswa. Taurus ejwayelekile (abesilisa nabesifazane) umthetho sokubhaliswa kwanoma yimuphi yimbangela ejwayelekile: umshado, ibhizinisi ngokuhlanganyela.
Ngo ubudlelwano bakhe romantic Taurus kungenzeka ngezinye izikhathi kube nobunzima. udaba lwabo ukwenqena ukubheka isimo kusukela ngaphesheya inkani mutual, kodwa uma Taurus iqala ukufunda emaphutheni abo, ukuthethelela umlingani wakho, indlela aphume kulesi simo esinzima kuyotholakala solvable.
Udaba lokuhlolwa kwesifo ocansini kubalulekile ikakhulukazi abathandi kanye bomshado Taurus. Okokuqala, basuke bakhangwa ezingeni ngokomzimba, bese kuphela ukushayela uhamba endaweni imizwelo nengqondo. Ubulili - samuntu ngokomzimba lothando kwabamele ejwayelekile lokhu constellation, esikhathini esizayo uzokwazi ukuguqula ibe nokuqonda okungokomoya umlingani wabo. Taurus - nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu uphawu kuyadida kakhulu. Uthanda ucansi, imali, zonke izinhlobo ukweqisa, kodwa isimo sengqondo izidakamizwa omubi kakhulu. Bakholelwa ukuthi izidakamizwa, isintu imi endleleni engafanele, okuholela ekufeni kwethu okungokomoya ngenakugwemeka.
Ayikho izidakamizwa ayikwazi ancintisane ulwazi eside oludakayo kothandekayo noma intandokazi yakho! Ubulili - yilokhu abazithandayo kakhulu. Owesilisa Taurus / Taurus wesifazane - akupheli, Fusion eyinkimbinkimbi imizimba! Abamele le-constellation ngaphezulu ukunambitha amathuba izinkanuko ubulili, kunokuba nokuqukethwe kwalo ngokomzwelo. Taureans ngokuvamile Ozakwethu ngazwilinye yokuhlanganyela ubuhlobo bobulili. Indlela ababeziphethe ngayo libuswa Venus, enikeza bobabili umuzwa imfudumalo nothando. Taurus namanje nesineke, eqinile oqine ngokomzwelo. Kodwa wawuhlukunyezwe kokuhlasela zivela kubo kanye njalo ngemva kweminyaka eyishumi.
Ngezinye izikhathi ubuhlobo Taurus zikhona nobunzima, kodwa sibonga ikhono ezingavamile yesibonakaliso ukuqonda nomunye ngaphandle amazwi, kungabonakali ulubonise ngayo uthando kanye nesidingo othandekayo, kalula uzinqobe.